na Fitsaboana Tradisionela Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina. Fantatra nandritra ny tafa nifanaovany tamin’ny mpanao gazety omaly fa notambazana 4 miliara Ar ny tenany mba hampiato ny asa fitsaboana amin’ny alalan’ny FITRAMA saingy tsy natakalony ny fitiavany ny tanindrazany izany.
FOMBA FIASA TSY MENDRIKA
Tsy nahazo taratasy fampilazana ny filohan’ny FI.TRA.MA Rafanomezantsoa Jean Nirina tamin’ireo vaovao niparitaka mikasika azy toy ny tsy fahafahany manao dokam-barotra intsony…. Tany anaty tambajotran-tserasera no nahalalany izany izay nanononana ny anarany sy ny momba momba azy ka nahatonga azy hiteny fa tokony amin’ny alalan’ny taratasy mihidy anaty valopy no handefasana ireny fampilazana ireny. Mampalahelo ilay fomba fiasa hoy izy indrindra raha tompon’andraiki-panjakana ambony eto amin’ny firenena toy ny ministra no manao izany izay tokony ho maodely. Ny fanenjehana ny kaonty Fake no tokony hatao hoy izy fa manjary manimba. Raha izany mantsy hoy izy no fomba fiasa hatao eto amin’ny firenena dia entina ho aiza ny Malagasy 25 tapitrisa.
MANANA KASKETY MARO
Raha araka ny fanazavana nentin-dRafanomezantsoa Jean Nirina hatrany dia tao anatin’ny fotoana izay tokony niresahany mivantana tamin’ny vata fahitalavitra iray tsy miankina iray eto amintsika ny tenany no tsy nahazo nanao izany ka gaga sy zendana tanteraka. Notsiahiviny anefa fa manana kaskety maro ny tenany. Anisan’ny tena nahafantarana azy ny maha-filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy azy, izay fiaraha-monim-pirenena no sady fikambanana mpiaro ny zon’olombelona. Miady amin’ny herisetra hatao amin’ny vehivavy sy ny ankizy ihany koa ny Hafari. Ankoatra izay hoy izy dia Malagasy ny tenako ary afaka miteny amin’ny maha-olom-pirenena tsotra ankoatra ny maha-filohan’ny FI.TRA.MA ahy.
Mbola tena miaina amin’ny fanjanahan-tany hatrany isika hoy Rafanomezantsoa Jean Nirina, filohan’ny FI.TRA.MA. Kisarisary fotsiny ilay fahaleovantena hoy izy fa mbola tadiavin’ireo tera-tany vahiny zanahana hatrany isika, indrindra fa ny resaka fitsaboana. Nambarany fa tera-tany Karana no ao ambadik’io sakana goavana hatao azy io izay efa nanome azy lela-vola 4 miliara Ar mba hampiatoana avy hatrany ny fitsaboana nentim-paharazana. Tsy nanaiky izany anefa Rafanomezantsoa Jean Nirina noho ny fitiavany ny tanindrazany sy ho famaliany ny antson’ny Filoha mikasika ireo olona manampahaizana afaka hifanome tanana amin’ny Fitondram-panjakana amin’ny ady hatao amin’ny aretina coronavirus.
TOKONY ASANDRATRA HATRANY
Ny mampalahelo anefa hoy izy dia raha vao zavatra vita Malagasy na ny Malagasy no manao zavatra dia tsinontsinovina hatrany ary finganina mihitsy aza. Ny mifanohitra amin’izay anefa no tokony ho izy hoy izy dia ny fanandratana ny vita Malagasy izay mbola ady mamay hahafahana mampiakatra ny toe-karem-pirenena ka hitodihan’ny mason’izao tontolo izao eto amintsika. Rehefa ny orinasa lehibe sasany anefa hoy izy no manao dokam-barotra dia toa tsy misy olana fa rehefa ny FI.TRA.MA kosa no manao izany dia misy olana goavana. Na izany aza anefa dia notsindriany manokana fa tsy mila dokam-barotra intsony ny FI.TRA.MA. Efa betsaka ny vita hoy izy ary efa maro ireo olona sitrana ka ireto farany ihany dia afaka hampita ny fahasoavana azony tao amin’ny FI.TRA.MA ho an’ny hafa.
MITOHY NY FITSABOANA
Notsiahiviny manokana moa fa anisan’ny namorona asa maro ho an’ny tanora teto amin’ny firenena ny FI.TRA.MA. Manomboka amin’ny fambolena ireo karazan-kazo izany, miampy amin’ny fanotazana azy, hatrany amin’ny fanodinana…miainga avy any Farafangana. Nanampy ny orinasan-tserasera ihany koa izy tamin’ny alalan’ny dokam-barotra mampidi-bola hanampiana ny mpiasa, indrindra ao anatin’izao krizy izao. Efa zava-dehibe izany hoy Rafanomezantsoa Jean Nirina ary ao anatin’izao 15 andro hisian’ny fihibohana tanteraka eto amin’ny Faritra Analamanga izao dia miasa toy ny mahazatra ny FI.TRA.MA manerana ny Nosy mandray ireo tsy salama rehetra. Nomarihiny manokana moa fa tsy hihemotra amin’ny fanandratana ny vita Malagasy ny FI.TRA.MA.